Recycle Bin on iPhone si uu idiin badbaadiyo ka soo gaartay xogta
Recycle Bin / Trash Talooyin
1.1 Ladnaansho files ka Recycle Bin
1.2 Qari Recycle Bin
1.3 Soo Celinta Recycle Bin
1.4 faaruqa ah Recycle Bin
2.1 Ciidanka Trash faaruqa ah ee Mac
2.2 Ladnaansho tirtiray Faylal ay ku Mac
2.3 waxa ay qashinka Mac
2.4 tirtireyso Trash faaruqa ah Mac
3 Recycle Bin / Qashinka qalabka kale
3.3 Trash iPad karaa
Ma jiraa Recycle Bin ku iPhone si uu idiin badbaadiyo ka soo gaartay xogta
Waxaa loo baahan yahay ee recycle bin ah ee dukaamada dhamaadka sare oo kasta, oo hada la isticmaalo adduunka oo dhan. Waxaa la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ka dhigi doonaa iyo sidoo kale hubineysaa in files la kac ahayn tirtiray waxa lagu soo celiyo oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Sidoo kale waa in la ogaadaa in inta badan oo ka mid ah codsiyada in la siiyaa in ay users arrintan la xiriira waa kuwa in ay yihiin lacag la'aan iyo sabab la mid ah ay sidoo kale lagu qiimeeyo sare sida qof walba jecel yahay si aad u hesho lacag la'aan ah in arrintan la xiriira.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in gacanta lagu codsiga waxa kale oo lagala soo bixi sameeyo iyo isticmaalka la caddeeyo sababta oo ah haddii aan markaas sameeyo codsiga ma laga yaabaa in la user si fiican u shaqeeyaan iyo natiijooyinka la doonayo waa wax in aan lagu fulin karo arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xusay in kuwan iyo maaraynta qashinka oo dhan lagu horumariyo ilaalinta ku haysaa heerarka horumarka ugu badan oo inkastoo free codsiyadaas waxaa inta badan updated iyo baahida loo qabo in Saacadda waa in la hubiyo in codsiyada loo xiraa habka ugu wanaagsan oo waa user helo ugu wanaagsan ee reer diinta iyo sidoo kale in ay tahay waqtigii oo aan arin kasta.
Ma jiraan wax recycle bin app for iPhone / iPad?
Nasiib darro waa su'aal jawaabta taas oo weyn MAYA ah iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in loo fiirsado in user inay hubiyaan in waxyaabaha la hal mar tirtiray ka iPhone waxaa marnaba soo kabsaday ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in codsiyada iyo xogta la xiriira in joogo on xasuusta iPhone aan la kaliya si taxadar ah laakiin waxa jira tallaabooyin taxaddar Sidoo kale waa in la qaado si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo ka dhigi state of natiijada tahay in arrintan la xiriira ka. Warka wanaagsan waa in Apple Inc. ma laha hab rasmi ah u soo ceshano xogta lumay laakiin waxaa ka jira qaar ka mid ah siyaabaha midabbo oo aan rasmi ahayn si loo hubiyo in xogta la soo celiyo oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in qaybtii dambe ee tutorial waxaa sidoo kale bartay si loo hubiyo in ugu fiican iyo barnaamijka software ugu cabsi badan, waayo, wax kaqabashada xogta la soo bixi oo lagu rakibay in la hubiyo in user ka dhigi lahaa helo natiijada ugu fiican ee aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in talaabooyinka la bixiyo waxaa sidoo kale la fuliyo si la mid ah.
Sida loo soo celiyo files tirtiray on iPhone?
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in aan la waayin si rasmi ah in la hubiyo in xogta la baxey ka iPhone si kastaba ha ahaatee waxaa jira siyaabo aan rasmi ahayn si ay u hubiyaan in arrinta la xalin aan wax dhibaato ah oo Wondershare Dr. Fone waa mid xal sida taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican iyo farsamo ugu horumarsan yihiin ma ahan oo keliya codsatay laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan ee ugu laabto. The makaanikada guud ahaan in ay la geeyay gudahood Dr. Wondershare ka Fone ayaa xaqiijiyey in sida ugu fiican ee la soo gundhig nidaamka ah in la hubiyo in isticmaalka ay tahay mid fudud oo keliya ma aha, laakiin ku users laylis ku tegi kartaa aan arrinta wax ka dhigi lahaa iyo dhibaato. Waa diinta wax ku ool ah oo wax ku ool ah ee barnaamijka kaas oo u hubinaya in user helo natiijada ugu fiican oo xogta ka iPhone waxaa soo kabsaday oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aan wax ku ool ah oo keliya, laakiin waxa ay sidoo kale siisaa 100% damaanad ah in faylasha laga badiyay waxaa laga heli doonaa iyada oo aan wax dhibaato ah haddii ay tahay in aan la overwritten la nooc ka mid ah barnaamijka kale ee la soo bixi ujeeddo kasta. Saar waxaa la xaqiijiyey in haddii iPhone ku hoos su'aal la kulmay shuruudaha markaas user wuxuu heli doona 100% kabashada la qasabno dhawr.
Sida loo soo celiyo files tirtiray on iPhone iyadoo la kaashanayo Wondershare Dr. Fone?
Geedi socodka uu soo xiriira Dr. Wondershare ka Fone waa mid fiican oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo terminologies ugu horumarsan waxaa loo isticmaalaa kaliya qasabno yar si loo hubiyo sameeyo in gobolka muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay. Si aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in hannaanka uu soo hoos ku xusan waxaa la socda sida ay tahay in ay ka fogaadaan wax kasta oo arrinta iyo dhibaato sameeyo:
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/drfone-iphone-data-recovery.html user ay u baahan tahay inaad kala soo baxdo oo ay maamulaan codsiga in la bilaabo nidaamka:
2. user ayaa markaas ka dhigi doonaan kuwa la hubo in button bilowday baaritaan la sii adkeeyey si faylasha lumay gooba gal telefoonka iyo tan ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa sida fudud isticmaalka ee Wondershare Dr. Fone waa marka ay timaado laylis users:
3. user ayaa markaas ka dhigi doonaa hubiyo in caafimaadka file oo kale la xidhiidhaan macluumaad ku saabsan files ka soo kabsaday ayaa loo arkay si fiican:
4. user ayaa xaqiijin kara in xogta la midkood kabsaday in qalab ama in computer sida oo loo arko inay taam noqon doonaan:
Talooyin in ay ka fogaadaan khasaare xog ku saabsan iPhone
Ka dib waxaa ku qoran talooyin qaar ka mid ah in la tixgeliyo by user ee arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay waxaa ku riyaaqay oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
1. gurmad xogta waa dhinaca ugu muhiimsan taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee adeega ilaalinta xogta farshaxanka.
2. shirkadaha waa in la horumariyo buugga sidan oo kale taas oo ka dhigaysa hubiyo in khasaare xog ku saabsan iPhone waa khatar ah oo aan la hagaajin karo ah. Marka wacyi user la abuuray xogta noqon doonaa nabad iyo xasilooni.
3. Si looga fogaado khasaare xogta waxaa sidoo kale ku taliyey in dadka isticmaala si loo hubiyo in barnaamijyada software-kabashada ugu fiican waxaa loo isticmaalaa dib u soo kabashada ama ka dhigaysa mid fudud.
Hagaha ugu fiican si ay u qashinka iyo sida ay kuu caawin lahaayeen
Sida loo qasbi madhan qashinka aad Mac
Sida loo Undelete Recycle Bin ee Windows ama Trash ee Mac
Sida loo abaabulo Photos on iPhone (6s iPhone mid)
Galaxy qod6 Edge qallooca vs iPhone 6 qallooca
Isticmaal iPhone Qaadashada Tixan Photo
Top 5 lagu bedelan karo Photoshop Wixii iPhone
Messages Love u saaxiibtiis, saaxiib, iyo naagtiisii, iyo Sayga
A Guide Full on Sida loo hagaagsan iPhone
Sida loo dib iPhone in External Hard Drive
> Resource > iPhone > Ma Recycle Bin ku iPhone waxaa jira inaan idin ​​badbaadiyo oo ka soo gaartay xogta